English Movie – Page2– MM Movie
Earthquake bird မြန်မာစာတန်းထိုး
Earthquake bird မြန်မာစာတန်းထိုး 👇👇👇👇👇 ဇာတ်ခခြကည့်န်ဒေါင်းရန်
Posted on December 31, 2019 Author admin	Comments Off on Earthquake bird မြန်မာစာတန်းထိုး
Don’t let go 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး
Don’t let go 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး 👇👇👇👇👇👇👇👇 ဇာတ်ခခြကည့်န်ဒေါင်းရန်
Posted on December 31, 2019 December 31, 2019 Author admin	Comments Off on Don’t let go 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး
Arctic Apocalypse (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Arctic Apocalypse (2019)မြန်မာစာတန်းထိုး ==================== ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ လာမှုတွေကြောင့် ရေခဲတောင်တွေ အရည်ပျော်ပြီး ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပူချိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းကာ နှင်းမုန်တိုင်းတွေလည်း ဖြစ်လို့လာပါတော့တယ်…. ဘရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ သိပ္ပံပညာရှင် လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့ သမီးလေးဖြစ်ပြီးတော့ မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာ ချစ်သူနဲ့ ခရီးထွက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့ တစ်နေ့ မုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာချိန်မှာ မိဘတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ ခရီးကနေ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ လမ်းတွေပြို နှင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်နဲ့ စီးလာတဲ့ကားလည်း ဆုံးရှုံးသွားပြီး စာသင်ကျောင်း တစ်ခုမှာ သွားရောက် သောင်တင်နေခဲ့ပါတော့တယ်… သိပ္ပံပညာရှင် လင်မယားနှစ်ယောက်လည်း သူတို့သမီးရောက်နေတဲ့နေရာကို လာရောက်ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ကြပုံကို စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ထိတ်ဖွယ်ရာ ကြည့်ရှုကြရမှာပါ ၂၀၁၉ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှူချင်သူတွေ အတွက် သဘောကျစေမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာကတော့ Eric Paul Erickson, […]
Posted on December 31, 2019 Author admin	Comments Off on Arctic Apocalypse (2019) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ad Astra (2019) ================ ဘရက်ပစ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်လာပါပြီ။ ဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ လက်တင်ဘာသာစကားလုံးကို ယူထားတာဖြစ်ပြီး “ကြယ်တွေဆီသို့” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင် စစ်စစ်ပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့။ လူတွေဟာ လကမ္ဘာနဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းက ဂြိုလ်တွေပေါ်မှာ စခန်းတွေဆောက်ပြီး သုတေသနတွေ လုပ်နေကြပါပြီ။ ဒီ အာကာသ သုတေသနတွေရဲ့ သူရဲကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ကလစ်ဖို့ မက်ဘရိုက်ဟာ အာကာသထဲမှာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ သက်ရှိတွေကို ရှာဖို့ နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆုံးအစွန်ထိ သွားရင်း ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါ အဲဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ယာဉ်စခန်းကနေ ကမ္ဘာနဲ့ဂြိုလ်တွေအားလုံးကို အန္တရာယ်ပေးမယ် စွမ်းအင်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒေါက်တာ မက်ဘရိုက်ကို ရှာဖို့ သူ့ရဲ့ သားဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး ရွိုင် […]
Posted on December 31, 2019 Author admin	Comments Off on Ad Astra (2019)
acceleration 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး
acceleration 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး 👇👇👇 ဇာတ်ခခြကည့်န်ဒေါင်းရန်
Posted on December 31, 2019 Author admin	Comments Off on acceleration 2019 မြန်မာစာတန်းထိုး
White Tiger(2012) ************************** ရုရှားတင့်တပ်ရင်းရဲ့ အရာရှိကြီးတွေ အစည်းအဝေးတစ်ခုအရေးေ ပ်ါပြုလုပ်နေတယ်….အကြောင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ တင့်ကား(၁၅)စီး နဲ့ ဘီးတပ်အမြှောက်တွေကိုဂျာမန်တွေက ဖျက်ဆီးသွားလို့ပါပဲ….တ င့်တပ်ရင်းချင်း စီးချင်းထိုးတယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရပေမယ့် ရုရှားတွေ ရဲ့တင့် (၁၅)စီးနဲ့ ဘီးတပ်အမြှောက်တွေကို(၁၀)မိနစ်အတွင်းဖျက် ဆီးသွားတာက အဖြူရောင်တင့်(၁)စီးထဲဖြစ်လို့ပါပဲ…ဒီတင့်ကတော့ ဂျာမန်တို့ရဲ့ White Tiger ဆိုတဲ့တင့်ပါ….[[[ ဒီ Tiger တင့်အမျိုး အစားဟာ FURY ဆိုတဲ့ကားမှာ ဘရက်ပစ်တို့M4 Sherman တွေ ကို အားပါတရဖျက်ဆီးပြသွားတာ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေသိမှာပါ]]တစ်စီး ထဲက ဖျက်ဆီးသွားတော့ ရုရှားတင့်တပ်က အကြီးအကဲတွေနဲ့နည်း ပညာသမားတွေအတွက်တော့ တကယ့်သွေးပျက်စရာပါပဲ…ပျောက် ကျားစစ်ပုံစံဆင်နွဲနေတဲ့ ဒီ White Tiger ကြီးကြောင့်များစွာအထိနာေ နတဲ့ရုရှားတွေဟာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ တင့်တပ်ဖွဲစီစဉ်ပါတော့တ ယ်..ဒီအထဲမှာတော့ အတွေ့အကြုံများစွာရှိနေတဲ့ တင့်ကား(၁၅)စီး တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်မသေပဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကို […]
Posted on December 19, 2019 Author admin	Comments Off on White Tiger(2012)
Bruce Lee ရဲ့သား Brandon Lee သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Crow (1994) ဇာတ်ကား 👇👇👇 ဇာတ်ခခြကည့်န်ဒေါင်းရန်
Posted on December 19, 2019 December 19, 2019 Author admin	Comments Off on The Crow (1994)
The Bank Job (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး..ဘန်ဖောက်တဲ့ကား
The Bank Job (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး..ဘန်ဖောက်တဲ့ကား စောက်ရမ်းမိုက် မင်းသားကလဲ Jason Statham ဆိုတော့ ဘာအညွှန်းမှ ပေးစရာမလို့တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ သူဘယ်လို ခပ်မိုက်မိုက်တွေ လုပ်ပြပြီး ပရိတ်သတ်ကိုဖမ်းစားဦးမလဲဆိုတာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကြည့်နေယုံပါပဲ။ 👉👉ဇာတ်ခခြကည့်န်ဒေါင်းရန်
Posted on December 19, 2019 Author admin	Comments Off on The Bank Job (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး..ဘန်ဖောက်တဲ့ကား
Sully (2016) *********** မြန်မာစာတန်းထိုး
Sully (2016) *********** မြန်မာစာတန်းထိုး Blu-ray 1080p IMDB 7.8 ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၀၉ ခုနှစ် တစ်လပိုင်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မြစ်ထဲကို လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ထူးခြားမှုကတော့ လေယာဉ်ပေါ်က လူ ၁၅၅ ယောက်လုံးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့်ခ်က အမေရိကန်ရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ ပိုင်းလော့ကြီးနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မြစ်ထဲကို လူအသေအပျောက်မရှိ ထိုးဆင်းနိုင်ခဲ့လို့ တကယ်ချီးကျူးစရာ ဖြစ်ခဲ့သလို ၂၄ မိနစ်အတွင်း သင်္ဘော လေယာဉ်နဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လူ၁၀၀၀ ကျော်စုစည်းပြီး အားလုံးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကလည်း အံသြစရာတစ်ခုလို့ ပြောသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ IMDb rating 7.8 ရထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အားလုံးက သူရဲကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ […]
Posted on December 19, 2019 Author admin	Comments Off on Sully (2016) *********** မြန်မာစာတန်းထိုး